'एक्स्पोज स्क्यान्डलमा फस्नुपरेको छैन' : हार्षिका श्रेष्ठ, नायिका । – Namaste Filmy
'एक्स्पोज स्क्यान्डलमा फस्नुपरेको छैन' : हार्षिका श्रेष्ठ, नायिका ।
[dropcap]ह[/dropcap]र्षिका श्रेष्ठ नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी आशा लाग्दी नायिका हुन । फ्रि–फ्रयाङ्क, मोर्डन र फरासीली यी नायिकाले दश चलचित्रहरुमा सफल अभिनय गरिसकेकी छिन । उनको अंगालो यो मायाको, कर्कस र जंजिर प्रर्दशन भइसकेका चलचत्रि हुन भने ”मिसन पैसा रिलोडेड”, नतिजा, नागबेली, मुखौटा, मिस्टेक, टिम ४, चलचित्रहरु रिलिज कै क्रममा रहेका छन् । हाल राजेन्द्र श्रेष्ठको लगानीमा निर्माण भइरहेको चलचित्र “साइकल” का गीतका केहि दृष्यहरुको छायाँकन भने बाँकी रहेको छ । पछिल्लो समयमा ऋषि न्यौपानेद्धारा निर्देशित चलचित्र खतरनाकमा ब्यस्त रहेकी छिन । उनको यसै चलचित्रको सुटिङ्को दौरान उनको दाहिने खुट्टाको गोलीगाँठो चर्किएको छ । निकै नै तनावमा रहेकी यीनै चिटिक्क र आकर्षक नायिका हर्षिका सँग चलचित्र क्षेत्रका विविध पक्षमा नमस्तेफिल्मीका लागी राजेन्द्र कार्कीले कुराकानी गरेका छन ।
अहिले कुन कुन चलचित्रमा ब्यस्त रहँदै आइरहनु भएको छ ?
म पछिल्लो समयमा ऋषि न्यौपानेद्धारा निर्देशन भइरहेको चलचित्र खतरनाकको छायाँकनको क्रममा हेटौंडामा थिएँ । राजेन्द्र श्रेष्ठद्धारा निर्माणाधिन चलचित्र “साइकल” को गीतका केहि दृष्यहरुको छायाँकन कार्य बाँकी रहेको छ । अरु चलचित्रहरुका लागि पनि काम शुरु गरिहाल्नु पर्ने थियो । तर दुर्भाग्य भनौं, यो दुर्घटना हुन पुग्यो ।
यो दुर्घटना कसरी हुन पुग्यो ?
चलचित्रमा आत्महत्याको दृष्य दिनु पर्ने थियो । जसका लागि म हेटौडा स्थित राप्ति खोलामा हामफाल्नु पर्ने थियो । हाम फाल्दा ढूङ्गामा चिप्लीएर गोलीगाँठो चर्किएको छ । चोट त सामान्य नै हो तर करिब महिना दिन सम्म त मैले आराम नै गर्नुृ पर्छ ।
दुर्घटनाका कारण तपाई निकै चिन्तामा हुनु हुन्छ भन्ने सुनिनमा आएको छ । के यो सत्य हो ?
मेरोमा धेरै नै जिम्मेवारीहरु थिए । चलचित्र साइकलको केहि गीतका दृष्यहरुको छायाँकन बाँकी थियो । मुखौटाको प्रोमोशनको लागि दौडधुप गर्नु पर्ने थियो । नयाँ चलचित्रहरुको काम पनि छिट्टै नै प्रारम्भ गर्नु पर्ने थियो । खतरनाकको नै धेरै कामहरु बाँकी छ । खुट्टामा प्लास्टर गरेर घरमा बस्दै सबैलाई सरी भन्नु परिरहेको छ । मेरो कारणले अरुलाई समेत तनाव झेल्नु परिरहेकोले त चिन्ता लाग्ने स्वभाविक नै भयो । के गर्नु दुर्घटना भनेको आकस्मिक नै हुने रहेछ । नसोचेको हुन गयो । तर धेरै शुभचिन्तकहरुबाट पाएको स्वाथ्य लाभको कामनाले मलाई चिन्ताबाट विस्तारै मुक्त बनाउँदै लगिरहेको छ । मेरो यत्तिका शुभचिन्तक र माया गर्नेहरु रहेछन भन्ने त मलाई अन्दाज नै थिएन । नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा मेरोे अझै जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेकी छु ।
प्रशंग अलि बदलौं, तपाईलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्र की सुन्दरी र फरासीली नायीका भनिन्छ । तपाई चलचित्रमा प्रस्तुत गरिने ग्याल्र्मसको विषयमा कत्तिको सचेत रहँदै आइरहनु भएको छ ?
वास्तवमा यो लामै बहसको विषय बन्न सक्छ । अभिनयको सन्र्दभमा कुरा गर्ने हो भने त कथावस्तु अनुसार निर्माता÷निर्देशकको कल्पना गर्छन र डिजाइनरले ड्रेसहरु हामीलाई उपलब्ध गराउने हो । हामीलाई जस्तो भनिन्छ त्यस्तै लगाउने हो । तर कथावस्तु सुहाउँदो भने हुनु पर्दछ ।
एक्सपोजको सन्र्दभमा तपाई आफुलाई कत्तिको उदार ठान्नु हुन्छ ?
पुर्णरुपमा नै एक्सपोज भएर काम गर्ने हो भने त त्यस्ताहरुका लागि अन्य चलचित्रहरु पनि बन्ने गर्दछन, त्यता नै लागे भइहाल्यो । तर हामी कहाँ सचेत हुनु पर्दछ भने हाम्रा अभिभावकहरुले हामीले अभिनय गरेका चलचित्रहरु समेत निर्धक्क हेर्न सकुन । यो विषयमा म आफुलाई त्यस्तो उदार ठानेकी छैन ।
तपाई आफुले अहिले सम्म “एक्सपोज स्क्याण्डल” को कत्तिको सामना गर्नु परेको छ ?
चलचित्र नतिजाको एउटा गीतको दृष्याकंन जसको निर्देशन बसन्त श्रेष्ठले गर्नु भएको थियो, त्यसका केहि दृष्यहरुका लागि सेन्सर बोर्डले स्विकृत नदिएको घटना छ । भाग्यवस यस्तो स्काण्डलमा अहिले सम्म फस्नु परेको छैन ।
नव प्रवेशी खासगरी नायिकाहरु धेरै नै उदार रुपमा एक्सपोज हुने गरेका छन । यस विषयमा तपाईको धारणा के रहेको छ ?
नव प्रवेशी नायिकाहरुले सर्व प्रथम त आफुलाई चाडै नै चर्चामा ल्याउन उदार देखिएका हुन सक्छन । म त त्यसलाई अपरिपक्वता भन्छु । अर्को कुरा यो विषय निर्माता निर्देशकहरुले नबुझेका हुन वा धेरै बुझेका हुन म आफुले भने बुझ्न सकिरहेकी छैन । आफु एउटा स्थापित कलाकारहरु भएर पनि हुनसक्छ मलाई भने अनावश्यक एक्सपोज हुन कसैले बाध्य बनाउनु सकेका छैनन ।
आफ्नो काम र आम्दानी प्रति कत्तिको सन्तुष्टि हुनु हुन्छ ?
यो एउटा रमाइलो क्षेत्र पनि हो । काम गर्दा आनन्द आउँछ त्यो एउटा पक्ष हो भने सन्तुष्टि अर्को पक्ष हो । आफुलाई चित्त बुझ्ने ९सन्तुष्टि० तरिकाले चलचित्रमा प्रस्तुत हुन अझै सम्म पाइरहेकी छैन भन्ने लागिरहेको छ । आम्दानीको सन्र्दभमा त पत्रकार, कलाकार सबैलाई प्रष्ट भएकै कुरा हो, चलचित्रको प्याकअप पछि आफ्नो पारिश्रमिकको लागि निर्माता निर्देशकहरुसँग कति झमेला उठाउनु पर्छ भनेर ।
यस क्षेत्रमा तपाईले सबै भन्दा दुःख लाग्दो पक्ष के पाउनु भएको छ ?
पारिश्रमिकको विषयमा त समस्या छदैछ । तर सबै भन्दा दुःख लाग्दो पक्ष भनेको दर्शकहरु नेपाली चलचित्रलाई हल सम्म आएर नहेरिदिनु र चलचित्र पत्रकारहरुले हिन्दी चलचित्रका सामगं्रीहरुलाई नै प्राथमिकता दिएर प्रशारण र प्रकाशन गर्नु नै हो । यो जस्तो दुःखको कुरा अरु के हुन सक्छ र रु
अन्तिम मा केहि भन्न चाहनु हुन्छ ?
अहिले देशका अधिकांश शहरहरुमा स्तरिय चलचित्र गृहहरुको पनि निर्माण भइसकेका छन । कृपया नेपालीहरुको योगदान रहेको नेपाली चलचित्रहरुलाई माया गरिदिनु र हल सम्म आएर हेरिदिनु होला भन्ने हृदय देखि नै अनुरोध गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।
बार्सिलोनामा पक्राऊ परे बिराट र अनुष्का ।